အသံလွှင့်သူများအတွက်နောက်ကြီးမားသောအရာ - Hybrid ယာဉ်များ? | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » လူငယ်ကဏ္ဍများအတွက် Next ကိုကြီးရာ: Hybrid ကိုယာဉ်?
သတင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသကဲ့သို့ပင်ဒေသခံဘူတာအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကို, အထူးပြု apps များ, အမျိုးသားရေးမီဒီယာ, နှင့်အိမ်နီးချင်းဒေသများတွင်အချို့ကိစ္စများတွင်ပိုမိုကြီးမားဘူတာနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်ရှိသည်။ ပရိသတ်တွေသူတို့တခြားနေရာကိုမတှေ့နိုငျသောအကြောင်းအရာများကိုဒေသခံဘူတာမှကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအပြိုင်ခုနှစ်, စုစည်းတင်ဆက်အကြောင်းအရာအချို့အမျိုးအစားများကုန်ကျစရိတ်, ဘူတာကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘို့လျော့နည်းစီးပွားရေးဖြစ်လာကြပါပြီ။
ဘတ်ဂျက်ဝင်ပြီးနေစဉ်ကျဆင်းနေမဟုတ်လျှင်ဒီတော့ဘယ်လိုဒေသခံဘူတာ, အလွန်လူစည်ကားမီဒီယာဈေးကွက်ထဲမှာယှဉ်ပြိုင်နိုင်သနည်း ဘူတာကသူတို့ကိုယှဉ်ပြိုင်ကူညီရန်တွေ့ပြီကြောင့်တလမ်းတည်းဖြင့်အခြားမီဒီယာအမြဲများကိုပေးစွမ်းနှင့်အချို့သော Syndication အစီအစဉ်များထက်ဘူတာရုံပိုမိုအမြတ်အစွန်းမနိုင်သည့်ဒေသခံသတင်းနှင့်အားကစားအကြောင်းအရာ သာ. ကွီးမွတျပမာဏ, ထုတ်လုပ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အများကြီးပို - - ဆယ်လူလာ Bond ကဗီဒီယို uplink ကျောပိုးအိတ်ထုတ်လွှင့်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့ကြတူသောနယူးနည်းပညာများပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဒေသခံသတင်းနှင့်အားကစားအကြောင်းအရာအတွက်ရရှိလာတဲ့, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ်းလှမ်းစဉ်နိမ့်သောဗီဒီယို uplink ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းပိုက်ဆံသည်။
ဆယ်လူလာ Bond မူလက ENG ကုန်တင်ကားတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်သူ့ဟာသူ positioned ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အတော်ကြာအဆင့်နည်းပညာ၏မွေးစားအတွက်တကယ်တော့ရှိခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကာလများတွင် 2009 ပတ်လည်နည်းပညာတစ်အသစ်အဆန်းသို့မဟုတ် backup လုပ်ထားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးလျှင်သင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်မယ်လို့ပဲတစ်ခုခုခဲ့သည် ဂြိုဟ်တု သို့မဟုတ်ခရိုဝေ့ဖ်ထရပ်ကားကိုမရရှိနိုင်ခဲ့, သို့မဟုတ်သင်ထိုကဲ့သို့သောရွေ့လျားမှုရိုက်ချက်များ, ဒါမှမဟုတ်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှမလိုင်းအရပ်၌အတွင်းမှအဆောက်အဦးများအဖြစ်ထူးခြားတဲ့တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူး, get ချင်တယ်ဆိုရင်။
မိုဃ်းတိမ်ကနေတဆင့်အထူးပြု Multi-directional ဆယ်လူလာအင်တင်နာသည် array, traffic ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကွန်ယက်အပြုအမူခန့်မှန်းဘို့စမတ် algorithms, တိုးတက်လာသောကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်း, ပိုပြီးသေးငယ် Bond ကိရိယာတိုးမြှင်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ရေတပ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အပါအဝင်နှင့်ကြာကြာ - ထိုနည်းပညာ၏ရငျ့နှင့်အတူ အဓိကဖဲ့သတင်းဖြစ်ရပ်များမှာယနေ့နှင့် Super Bowl တူသောကြီးမားတဲ့အားကစားဖြစ်ရပ်များ, ကမ္ဘာ့ဖလား: - ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်သင်တန်း၏, LTE ကိုအမြန်နှုန်းနှင့်ယေဘုယျဆယ်လူလာလွှမ်းခြုံအတွက်တိုးတက်မှုများ, နည်းပညာအမှန်ပင်ကြောင့်မူလကလုပ်ဖို့ထွက်ထားသောအရာကိုပြည့်စုံထားပါတယ် သို့မဟုတ်အိုလံပစ်ပိုမိုလယ်ကွင်းသမားတွေဖြစ်ရပ်များဤအမြိုးအစားအဘို့အစဉ်အလာကုန်တင်ကားစေလွှတ်များထက် uplink သူတို့ရဲ့အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်ဆယ်လူလာ Bond အပေါ်အားကိုး။
- ဆယ်လူလာ Bond ပေါင်းစပ်အပေါ်အားကိုးကြောင်းစပ်သတင်းမော်တော်ယာဉ်များ, Ka-Band တိုး, ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းချက်အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးမှလှည့်နေကြသည်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအပြည့်အဝစက်ဝိုင်းပြီးစီးခဲ့ပါသည်တူသောယခုပုံ ဂြိုဟ်တုနှင့် IP ကိုမိုက်ခရိုဝေ့ရိုးရာသတင်းဗင်ထက်သေးငယ်နှင့်ပိုပြီးလျင်မြန်သွက်လက်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်။ အဆိုပါနည်းပညာကိုကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ကယ်တင်တော်မူ၏, နှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းဆိုတည်နေရာမှ၎င်း, မြေပေါ်မှာနည်းပါးလာလူတို့နှင့်အတူ, ရာသီဥတုမဆိုအမျိုးအစားထဲမှာ, အပြောင်းအရွေ့အပေါ်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အစီရင်ခံစာဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လွှမ်းခြုံ: ဆယ်လူလာနှင့် Ka-Band ဂြိုဟ်တုအတူတူချထားလျှင်ပင်, Ku-band ထက်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်သိသိသာသာနိမ့်များမှာ ဂြိုဟ်တု။ အတူတူနှစ်ဦးစလုံးဆယ်လူလာနှင့် Ka နည်းပညာများပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်, ဘူတာနီးပါးစုံလင်သောလွှမ်းခြုံရ။ ဆယ်လူလာရှိ Ka-လွှမ်းခြုံသို့မဟုတ်ရာသီဥတုဆိုးရွားနေစဉ်အတွင်းအဘယ်သူမျှမဖြစ်ပြီး, ka ဆယ်လူလာလွှမ်းခြုံကန့်သတ်သည်အဘယ်မှာရှိဒေသများရှိကိုကျော်ယူနိုင်သောနေရာအပါအဝင်အများဆုံးဒေသများအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်နှိုက်, ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး SUV ကားတစ်ခုသို့မဟုတ် Mini-ဗန်ကိုလည်းအစဉ်အလာသတင်းယာဉ်များထက်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အနိမ့်သည်။ ထို့အပြင်ဤအသစ်သောမော်တော်ယာဉ်များအပြည့်အဝနောက်ထပ်လယ်ပြင်၌လိုအပ်အရင်းအမြစ်များပမာဏကိုလျှော့ချအဖြစ်အနည်းငယ်သာတစ်ဦးအဖြစ်လူတစ်ဦးခြင်းဖြင့် operated နိုင်ပါသည်။
Accessibility: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပြင်မျိုးစပ်သတင်းမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူလာကိုလိုက်နာနိုင်ဖြစ်ခြင်းကြမ်းတမ်းမြေပြင်အနေအထားအတွက်ပုံပြင်များ, ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းများအပြင်၌။ တစ်ဦး SUV ကားလွယ်ကူရာသီဥတုဆိုးရွားသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းသောလမ်းအခြေအနေများအတွက်န်းကျင်ရွှေ့ဖို့စေသည်။ ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုစဉ်အတွင်းဆယ်လူလာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တိုင်မှလေတိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစွန့်စားမှုလည်းမရှိနဲ့ ဂြိုဟ်တု ဟင်းလျာများ။ SUVs အဆိုပါမြေပြင်အနေအထားစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်အခါဇာတ်လမ်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာ get နှင့်ထို့ထက် ပို. လွယ်ကူစွာအစဉ်အလာသတင်းဗန်ထက်ပိုသောနေရာများအတွက်ရပ်ပေးနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ပင်အချို့သောရိုးရာယာဉ်များတစ်ဦးအသွင်အပြင်လာပြီဖြစ်ကြောင်း: ပိုပြီးဘူတာအဟောင်း ku ဖယ်ရှားပစ်ရန်စတင်နေကြသည် ဂြိုဟ်တု သူတို့ရဲ့တည်ဆဲဗင်ကနေပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆယ်လူလာ + Ka တီးဝိုင်းနှင့်အတူသူတို့ကို retrofitting ဂြိုဟ်တု, ဂီယာကုန်ကျစရိတ်၏ကယ်ဖို့။
နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲကျော်ကျနော်တို့အသက်လာဆယ်လူလာ Bond နည်းပညာမြင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိတ်ချရတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ကျနော်တို့သတင်းအခြေအနေများခြိုးဖောကျမှာပိုပြီးတိုက်ရိုက်လယ်ကွင်းအစီရင်ခံစာများယခုရိုးရာမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့်ထက်ဆယ်လူလာဘွန်းကနေလာမယ့်နေကြသည်, ထိုလမ်းကြောင်းသစ်သာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဟိုက်ဘရစ်သတင်းကိုမော်တော်ယာဉ်သစ်အမျိုးအစားများနှင့်အတူဆက်လက်မညျဖွစျကွောငျးကိုရှာပါ။ ရိုးရာ uplink နည်းလမ်းများသော်လည်းလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။ ဖြစ်ရပ်များ, မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုဂိမ်းနဲ့တူ, ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုလိပ်စာများနှင့်ထို့ထက် ပို. သေချာသောအဘို့, ထုတ်လွှင့်နေတုန်းပဲလာရန်နှစ်ပေါင်းရိုးရာ uplink အပေါ်အားကိုးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာ၏ကျန်ရှိသော 90% အဘို့, ဆယ်လူလာနှင့် Ka တူသောအသစ်က IP ကို-based နည်းပညာများကိုလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မီဒီယာဈေးကွက် reshaping ဆက်လက်အဖြစ်ဤနည်းပညာများပိုမိုဒေသခံဘူတာနှင့်ကွန်ရက်များအားဖြင့်တပ်ဖြန့်ဖြစ်လာသည့်ဟိုက်ဘရစ်သတင်းကိုမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်သေးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးပိုမိုလွယ်ကူအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုသေချာအတွက်သော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
VP စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, LiveU မှာအမေရိကတိုက်
ကဲန် Zamkow အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
လူငယ်ကဏ္ဍများအတွက် Next ကိုကြီးရာ: Hybrid ကိုယာဉ်? - ဇန်နဝါရီလ 4, 2017
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Hybrid ကိုသတင်းယာဉ်များ ကဲန် Zamkow ဒေသခံသတင်းနှင့်အားကစားအကြောင်းအရာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုက uplink အနာဂါတ်လှိုင်း 2017-01-04
ယခင်: ယာယီ - ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ - အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းသိပ္ပံ (NHSI)
နောက်တစ်ခု: Sr; ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ